किन पर्छ जुम्रा ? अध्ययनले देखायो यस्तो रोचक तथ्य !
काठमाडौँ, २१ पुस । सामान्यत : सरसफाईको कमीले प्राय मानिसको शरीरमा र कपालमा जुम्रा पर्ने गर्दछ । तर यसबारे गरिएको अध्यनबाट किन जुम्रा पर्छ भन्ने सन्दर्भमा नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएको छ । जुम्रा किन पर्छ ? कसरी पर्छ ? कुन उमेरको ब्यक्तिलाई जुम्रा पर्छ भन्ने बारे गरिएको एक अध्यनबाट यस्तो कुरा पत्ता लागेको छ ।
प्रत्येक वर्ष विश्वभरिबाट ६० देखि १२० लाख मानिसलाई जुम्रा पर्ने गरेको कुरा थाहा भएको छ । त्यसमा पनि स्कुल जाने बच्चामा भन्ने त हामी सबैले सुनेकै छौँ । जुम्रा एक ब्यक्तिबाट अर्को ब्यक्तिमा सजिलै सर्छ । त्यसैले विद्यालयमा एउटाको टाउकोमा जुम्रा परेको छ भने अर्कोमा पनि सजिलै सर्छ ।
नाङगो आँखाले सजिलै ठम्याउन नसक्ने गरेर निकै सानो अवस्थामा उत्पन्न हुने किरालाई जुम्रा भनिन्छ । ठुलो आकारमा जुम्रालाई तीलको गेडाको अकारमा देख्न सकिन्छ । विशेष गरेर खैरो र कालो र रङ्गको हुन्छ । जुम्रा अरु प्राणीमा निर्भर भएर बाँच्ने प्राणी भएकाले यसलाई प्यारासाइट भनिन्छ । जुम्रालाई बाच्नको लागि मानव शरिरको न्यानो चाहिन्छ । यसले शरिरको रगत खाएर बाच्छ ।
पुर्व मन्त्रि गौतमको टिप्पणी : वाइडबडीको निर्णय सुरुवात देखि नै गलत, भष्ट्राचारी लाई जेल हाल्नै पर्छ (भिडियो)
अशाेक दर्जीका पूर्व प्रिन्सीपल दिपक न्याैपानेले मुसहर बस्तीमा भित्राए धेरै खुसी